﻿﻿ soomaali - Sorah Al-Qiyamah ( The Resurrection )
Noble Quran » soomaali » Sorah Al-Qiyamah ( The Resurrection )
saas ma aha Ee waxaad Jeceshihiin Dadow tan soo Dagdagaysa (Adduunyada).
Waxaadna ka tagaysaan aakhiro.
Wajiyaal Maalintaas way ifi.
Wajiyaalna Maalintaas way kaduudsami.
Waxayna hubtaa in lugu fali Balaayo.
Saas ma aha ee markay naftu gaadho Duunta (Waqtiga Geerida).
Oo la Dhoho uaa ku tufi.
Oo uu Yaqiinsado inuu Dhiman.
Oo labada Dhudhun isku marmaan (sakaraad Dartiis).
Eebahaa Xaggiisaa la aadi.
Mase Rumaynin Gaalku Xaqa mana tukannin.
Laakiin wuu Beeniyay wuuna Jeedsaday.
Halaag Buuse Mutaa.
Haddana Halaagbuu Mutaa.
Ma wuxuu u maleeyay Dadku in looga tagi Bilaash (Dan la'aan).
Markaas Noqoto xinjir oo Eebe Abuuro Ekeeyana.
Kana yeelo Labadii Nooc lab iyo Dhaddig.
Eebaha Saas kara miyuusan Awoodin inuu soo Nooleeyo wixii Dhintay.